एनसीसी बैंक पहिलो त्रैमासमा १० करोड रुपैयाँले नाफामा
काठमाडौं। एनसीसी बैंकको खुद नाफा बढाएको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो। यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुणा बढी..
​प्राइम कमर्सियल बैंकले १९ प्रतिसत बोनस सयेर दिने
काठमाडौं - प्राइम कमर्सियल बैंकले लगानीकर्तालाई १९ प्रतिसत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिले १९ प्रतिसत बोनस सेयर र एक प्रतिसत नगद लाभांस दिने प्रस्ताव..
​प्यासिफिक डेभलपमेण्ट बैंकले २० प्रतिशत बोनस शेयर दिने
काठमाडौं - प्यासिफिक डेभलपमेण्ट बैंकले आ.ब. २०७०/७१ को मुनाफाबाट आफ्नो शेयरधनीहरुलाई १० कित्ता शेयर बराबर प्रति १ कित्ता बोनश शेयर दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको संचालक समितिको ८७ औं बैठकबाट २० प्रतिशत..
सगरमाथा मर्चेण्टको बोनस सेयर प्रमाण पत्र वितरण कात्तिक २३ गतेबाट
काठमाडौं। सगरमाथा मर्चेण्ट बैकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडले बोनस सेयरको प्रमाण पत्र कात्तिक २३ गतेदेखि संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय, मानभवन, ललितपुरबाट वितरण गर्न लागेको छ । गत कात्तिक ५ गते सम्पन्न नवौं..
कैलाश विकास बैंकले १५ प्रतिसत बोनस सेयर र १० प्रतिसत नगद लाभांस
बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१को वित्तीय विवरणका आधारमा यो निर्णय गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पछि बैंकको साधारण सभाले पारित गरेपछि लाभांस लगानीकर्ताले पाउने छन्। बोनस सेयर वितरण पछि बैंकको चुक्ता..
कञ्चन डेभलपमेन्टले २१ प्रतिशत लाभांश दिने, २० प्रतिशत बोनस सेयर, चुक्तापूँजी १३ करोड पुग्ने
काठमाडौं। कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १।०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। बैंकको विहीवार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको..
Results 1896: You are at page 64 of 64
First Prev 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64